Ruushka oo digniin u diray siyaasiyiinta isku haaya doorashada Soomaaliya - Awdinle Online
Ruushka oo digniin u diray siyaasiyiinta isku haaya doorashada Soomaaliya
Dowladda Ruushka ayaa shaacisay inay cambaareeyneyso aadna uga xun tahay shaqaaqooyinkii ka dhacay Magaalada Muqdisho 19-kii Bishaan, isla markaana ay ka dhasheen khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Ku xigeenka Ergayga gaarka ah ee Ruushka u qaabilsan Qaramada Midoobay Anna Evstigneeva, oo ka hadashay shirkii Golaha Ammaanka ayaa sheegtay in inay muhiim tahay in khilaaf kasta oo jira lagu dhameeyo wadahadal.
Sidoo kale waxaa ay sheegtay in wada-shqeyn la’aanta kajirta Soomaaliya ay xoojin karto khilaafka, isla markaana loo baahan yahay in laga gudbo caqabadaha xilligan jira.
“Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan dhinacyada geeddi-socodka nabadeed ee Soomaalida in ay ka fogaadaan wax kasta oo tallaabooyin dhinac ah oo ay danta dalka iyo dadka ka hormariyaan himilooyinka gaarka ah ayay tiri” Anna Evstigneeva.
Sidoo kale waxaa ay sheegtay in dowladda Ruushka marnaba aqbali karin rabshado ka dhaca Soomaaliya taas bedelkeedana wax walba lagu xaliyo wada-hadal si looga gudbo caqabadaha, isla markaana dhamaan ay hoggamiyeyaasha Soomaalida ka fogaadaan go’aanadda halka dhinac ku saleysan.
Dhamaan madaxda ka qeyb-gashay shirkii golaha Ammaanka ee qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay shaqaaqooyinkii ka dhacay 19-kii Bishaan Magaalada Muqdisho, iyaga oo dalbaday in khilaafka jira wada-hadal lagu dhameeyo.
Previous articleDowladda oo mamnuucday isku imaatinka xilli musharixiinta ku dhawaaqeyn bannaabax
Next articleCismaan Dubbe” 19 Febraayo wixii ka dhacay Muqdisho waxey ahaayeen isku day afganbi